Maxaa dhacaya haddii nanotechnology iyo sirta farsamaysan ay keenaan dhimashada?
Filed in PHILOSOPHICAL	by Martin Vrijland	on 13 July 2017	• 8 Comments
Maxaa dhacaya haddii nanotechnology iyo sirta farsamaysan ay keenaan dhimashada? Maxaa dhacaya haddii transhumanists sida Ray Kurzweil Google iyo Michio Kaku (oo loo yaqaan ka Discovery Channel) heli siman yahay oo aan bedeli kartaa dhammaan unugyada dhimanaya noolaha ee jidhkeena by unugyada nanotechnology saari kaas oo ah ayna duleella u hidde sababa xanuunada iyo dhimashada, jacaylka-qorsheeyay ? Waa maxay sababta [...]
Sharciga qulqulaya: sharciga ugu fiican ee ka soo jeeda koofiyadda Ronald Plasterk!
Filed in PHILOSOPHICAL	by Martin Vrijland	on 12 July 2017	• 16 Comments
Waad og tahay isaga kuwii Wasiirka super dabacsanaadaan ahaa oo si lama filaan ah loo bedelay ka waxba by buugaagta iyo Gudoomiyaha at Wasiirka Buitenhof Waxbarashada, Dhaqanka iyo Sayniska ka hooseeya dawladda Balkenende afaraad. Ronald Plasterk ayaa laga yaabaa in uu yahay mid la aqoonsan karo oo uu ku dhufanayo sanqadhkiisa iyo dabeecadkiisa. Mararka qaar wuxuu ku dhajiyaa koofiyado khibrad leh [...]
'Horizon Zero Dawn' oo ka socota shirkadda ciyaaraha Amsterdam ee Guerrilla Games 1e talaabo dhab ah oo la taaban karo
Filed in PHILOSOPHICAL	by Martin Vrijland	on 11 July 2017	• 7 Comments
Barnaamijka telefishanka VPRO Tegenlicht ayaa barnaamij u soo diray 16 pril 2017 isagoo cinwaankiisu ahaa 'Dhamaan ciyaarta'. Magac wanaagsan oo la doortay, sababtoo ah dokumentigu wuxuu tusaale wanaagsan u ahaa sida caalamka oo dhan u kobcaya dad badan oo malaayiin dad ah ayaa naftooda lumiya iyagoo ciyaaraya ciyaaraha. Ciyaartaani waxay noqotaa mid macquul ah, waxaana si tartiib tartiib ah loo bedelay 'line line', [...]
Turkiga iyo Iran, weerarkii nebiyadii ku saabsanaa Israa'iil iyo waddada khariidadda ah ee loogu talagalay dawladda adduunka ee Luciferi
Filed in PHILOSOPHICAL	by Martin Vrijland	on 27 June 2017	• 32 Comments
Horaantii aan soo sheegnay in waxsii sheegyada diimeed ay u adeegaan sida nooca qoraallada dhabta ah ee aan ku noolahay. Waxaan sidoo kale sheegay in Turkiga uu ka soo baxo doorka Maajo iyo in Erdogan uu yahay Jog ee Maajo sida lagu xusay buugga bible ee Ezekiel (halkan fiiri). Ka hor inta aanad dhicin oo aad ka fikirto: "Oh no [...]
Internetka, geedka aqoonta, nolosha Apple & nolosha weligeed ah
Filed in PHILOSOPHICAL	by Martin Vrijland	on 3 June 2017	• 3 Comments
Nicholas Copernicus wuxuu qoray taariikhdeena 1543 ka dib markii Masiixa uu Sun u ahaa xarunta dhexe ee nidaamka qorraxda iyo in dhulka uu ahaa meeraha kaliya ee ku wareegsan qorraxda. Fikraddani waxay ahayd mid aad u naxdin badan wakhtigii uu dib u dhigey qoraaga shaqadiisa weyn ee astronomical iyo [...]
Da 'da' Aquarius ', Da'da Cusub iyo Amarka New World
Filed in PHILOSOPHICAL	by Martin Vrijland	on 29 December 2016	• 19 Comments
Marwo Helena Petrovna Blavatsky run ahaantii waa aasaasihii dhaqdhaqaaqa New Age ah oo ku milmaan doonaa Diimaha oo dhan iyo abuuritaanka dowladda adduunka 1 waa hab suurad wacan. Waxay u safartay adduunka oo dhan si ay u barto diimaha oo dhan. Xaqiiqadaas lafteedu waa inay noqotaa calaamad muujinaysa in gabadhani ay ka timid goobo si fiican u shaqeeya, sababtoo ah [...]
Maxaad uga welwelsan tahay caddaalad darada adduunka?
Filed in PHILOSOPHICAL	by Martin Vrijland	on 11 September 2016	• 2 Comments
Maxaad uga welwelsan tahay caddaalad darada adduunka? Taasi waa su'aasha ah in dad badani waydiiyaan. Tan waxaa badanaa lagu daraa in tani ay kaliya kuu keenayso tamar taban. Qaar ka mid ah dadka ayaa aaminsan in aad abuurto xaqiiqdaada u gaar ah, sidaas darteed haddii aad diirada saarto cadaalad darada, [...]
Su'aasha ugu weyn ee diinta: Yaa ah Ilaaha runta ah iyo Shaydaanka?
Filed in PHILOSOPHICAL	by Martin Vrijland	on 14 December 2015	• 12 Comments
Jawaabyo badan oo akhristayaasha ah ayaa la iga weydiiyay sababta aan ugu hadlo shaydaanka? Haddii uu jiro shaydaan, waa inuu sidoo kale jiraa Ilaah? Wixii akhristayaasha ah ee kaliya ee ku jira website this waxay noqon doontaa su'aalo gebi ahaanba aan macquul ahayn. Dhacdooyinkoodii waxaa laga yaabaa inaanay jirin wax ilaah ah oo wax walba ah [...]
Magic Leap maalgashiga Google wuxuu isku daraa illoob iyo xaqiiqda
Filed in PHILOSOPHICAL	by Martin Vrijland	on 26 Oktoobar 2015	• 2 Comments
Todobaadkii hore waxaan kala hadlay suurtagalnimada ee dunida ku nool dalwaddii in aan u sameeyey inay marjic u tahay natiijada cilmi ah, sida sharaxaad ka mid ah caalamka oo la "Aragti string (aragti string) in u dhaqmo sida code computer (halkan ka eeg). Waxaan sidoo kale ka hadlay suurtogalnimada jilid siman dhexdeeda. Tani waxaa si fiican loo fahmay [...]
Filed in PHILOSOPHICAL	by Martin Vrijland	on 20 Oktoobar 2015	• 27 Comments
In maqaal ku saabsan luqadda Cibraaniga, waxaan sharaxay sida caalamku yahay dhan oo ku saabsan simulation software. Anigu ma ahan kan ugu horreeya oo kaliya oo aan u yeedhno, xitaa xitaa cilmi nafsiga iyo abaalmarinta Nobel Prize George Smoot ayaa ka welwelsan su'aashaas. Inkasta oo uu ku yiraahdo TED soo bandhigay in uu yahay 'wax yar [...]
Guud ahaan Wadarta: 1.338.549
Faek Nousbaster op Coronavirus: halkee fayraska ka yimaadaa sidee bay u tarmaan uguna dhaqaaqaan?